Uncategorized – Page 11 – Shabakadda Amiirnuur
Gabaygaaan Daaman beel oo ka waramaya dagaalka Itoobiya ka dhex oogan waxaa tiiryay Wariye Cabdullaahi yaasiin Jaamac (Cabdullaahi-soomaali) oo sido kalena ah hal abuure suugaanta curiya wuxuuna ku bilaabay Darmaankeeda maansada rag baan daayin waaligoode, oo dushii ku joogoo hadba dhan u duwaayaaye, anse waxaan daneeyaa koleey xaajo dagataaye, dammaniyo […]
AlQaacidada Maqribul Islaam Oo Yeelatay Amiir Cusub.
Mujaahidiinta AlQaacida ee ka dagaallama wadamada Maqribul Islaam ayaa yeeshey hogaamiye cusub oo bedela hogaamiyihii Faransiisku ku dilay wadanka Maali dhowr bilood ka hor Sheekh Abii Muscab Cabdil Waduud. Kalimad uu jeedinayo hogaamiye lagu magacaabo Sheekh Quteyba Abuu Nucmaan Ash-Shanqiidhi ayuu ku sheegay in Mujaahidiintu yeesheen amiir cusub, kaas oo […]
Maqaallo Maxaa Cusub Uncategorized
Wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa Ismaamulka Tigeega ee TPLF u qabtay in ay muddo 72 saacadood ah isugu soo dhiibaan Ciidamadiisa Duulaanka ku jooga dhulka Tigreega oo todobaadyadaan dagaalo khasaare badan sababay ka dhaceen. taa micnaheedu waaxaa weeye ina y magaalada Caasimadda ah ee Makhalle ku soo wareejiyaan. asigoo hadalkiisa sii […]
ololaha Barashada Farta Carabiga oo Jilib laga daah furay.
Wilaayada Ilsaamiga ah ee Jubooyinka ayaa daah furay Olole lagu baranayo farta carabiga tasoo Bulshadu ay baahi weyn u qabaan. Munaasabad ka dhacday Magaalada Jilib ee Xarunta Wilaayada Islaamga ahe ee Jubooyinka ayaa lagu shaaciyay la dagaalanka qoris la’aanta Farta Carabiga. Waaliga Jubooyinka Sheekh Muxamad Abuu Cabdalla ayaa ka mid […]
Weeraro iyo qarax xalay ka dhacay gudaha dalka
Qarax ayaa Xalay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Xaruta Gobalka Mudug kaasoo lala beegsaday Ciidamada Maamulka Puntland. Waxaa la sheegayaa in qaraxa Ciidamada khasaare lagu gaarsiiyay sida ay sheegayaan ila xog xogaal ah. Xarakada shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay Mas’uuliyadda qaraxa. 2 askeri oo ka ayaa ciidamada Puntland uga dhaawacmay qaraxa […]
Itoobiyaaan lagu dilay dagaalka ka dhacay Gobalka Baay
ugu yaraan laba askeri oo ka tirsanaa Ciidamada Itoobiya ee duulaanka ku jooga gudaha Soomaaliya ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay Degmada Qansaxdheere ee Gobalka Baay. Weerar ay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin la beegsatay Itoobiyaanka ayaa sababayay dhimashada askartaan. Intii dagaal ku socday Itoobiyaanka waxaa laga gubay Gaari Uuraalka ah oo […]
Ciidamada Shisheeye oo shacab ku dilay Muqdisho.
Ciidamada Shisheeye ayaa Maanta Magaalada Muqdisho ku dilay dad shcab ah iyagoo kuwa kalana ku dhaawacay. Ugu yaraan laba ruux oo shacab ah ayaa la sheegay in ay dhinteen lix kalena ay ku dhaawacmeen deegaanka tirsan Degmada Kaaraan una dhaw isgoyska fagax welow ay suura gal tahay in Khasaaruhu intaas […]
Qaraxyo khasaare geystay iyo iyo weeraro ak dhacay Gudaha Dalka.
Laba qarax ayaa Xalay ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobalka Baay waxaana halkaa ka dhashay Khasaare soo gaaray Ciidamada Maamulka Koofur galbeed. Ugu yaraantii afar askeri ayaa qaraxaha ku dhaawacmay sida ila xog ogaal ahu sheegayaan. Dhaawacyada ayaa loo qaaday goobaha caafimaadka si loogu daweeyo waxaana aad loo sii […]